Wax ka beddel albaabka weyn ee Samoa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Wax ka beddel albaabka weyn ee Samoa
Airlines • News • Wararka Samoa • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Samoa ee Faleolo International Airport waxaa ku socota isbadal. Waxay ku taal meel 25 mayl galbeed ka xigta magaalada caasimada ah ee Apia, garoonka diyaaradaha waxaa markiisii ​​hore dhisay ciidamada badda ee Mareykanka kadib markii uu dagaalku ka qarxay Koonfurta Baasifigga sanadkii 1942.
Iyada oo xoogga la saarayo waxtarka ka baaraandegidda dadka, kor u qaadista tikniyoolajiyadda, nadaafadda iyo kor u qaadista awoodda, dib u habeynta Faleolo waxay la jaanqaadeysaa himilada dalka si loo daboolo baahida sii kordheysa ee kordhinta taraafikada rakaabka iyo in la horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha.
Dib-u-habeynta garoonka ayaa si tartiib tartiib ah loo soo gabagabeynayaa. Wajiga Koowaad wuxuu arkayaa casriyeynta iyo ballaarinta dhismaha bixitaanka. Wejiyada Labaad iyo Saddexaad ee la rabo in la dhammaystiro horraanta sannadka 2018 waxaa la arki doonaa ku darista Terminal cusub oo Imaatin ah iyo aagagga dadweynaha.
Hawada cusub ayaa sidoo kale kasoo muuqan doonta dhamaadka mashruuca iyadoo hoolka cusub ee soogalootiga la dhisay, Terminal ku meel gaar ah, oo hada shaqeynaya, ayaa loo isticmaali doonaa in lagu daboolo dhamaan duulimaadyada soo gala Faleolo.
Sonja Hunter oo ka tirsan Hay'ada Dalxiiska Samoa ayaa muujisay kalsoonida mashruucan, iyadoo soo dhaweysay horumarka oo qeyb ka ah dadaalada ku aadan sameynta Samoa oo ah xarun weyn ee safarka iyo ganacsiga Koonfurta Pacific.
“Madaarka cusubi wuxuu matalayaa qaab dhismeedka dalkeena. Samoa waxay si xawli ah uga dhex muuqaneysaa liisaska baaldiyo ee safarada badan iyo balaarin si loola tacaalo soo-galootiga soo kordhaya ayaa sidoo kale kor u qaadi doonta khibrada garoonka. Ma imaan karayn waqti ka wanaagsan waxaanan diyaar u nahay helitaan ballaadhan iyo kuwa cusub ee xambaara inay yimaadaan oo ay u tixgeliyaan Samoa inay tahay meel cusub, ”ayay tidhi Sonja.